XOG:- Muxuu yahay u jeedka uu Sheekh Shariif u tagayo Magaalada Jowhar? - Awdinle Online
XOG:- Muxuu yahay u jeedka uu Sheekh Shariif u tagayo Magaalada Jowhar?
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sh Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Maanta oo Axad ah waxaa ay ku wajahan yihiin Magaalada Jowhar ee Caasimadda Maamulka Hirshabeelle.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Ujeedka Sheekh Shariif uu yahay sidii loo dardar-gelin lahaa ololaha Doorashada Guddoonka Baarlamaanka dowlad Goboleedka Hirshabeelle iyo tan Madaxweynaha oo maalmaha soo socda la filayo inay dhacaan.
Ilo-wareedyo ku sugan Jowhar ayaa sheegaya in saacadaha soo socda uu Sheekh Shariif tegi doono halkaas, isla markaana magaalada laga dareemayo qaban-qaaban soo dhaweynta Shariif iyo wafdiga la socda.
Previous articleMadaxweynaha Galmudug oo Amar dul-dhigay Golihiisa Wasiirada
Next articleDEG DEG:- Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay dalka Canada